ဂင်းနစ်စ် စံချိန်အားလုံးသိမ်းကျုံးယူလိုက်ပီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂင်းနစ်စ် စံချိန်အားလုံးသိမ်းကျုံးယူလိုက်ပီ
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on May 29, 2012 in Creative Writing, Think Different | 15 comments
ကမ္ဘာ့ဂင်းနစ်အဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှ ယခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်များကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ ထူးခြားချက်မှာစံချိန်သစ်များအားလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံမှ အားလုံးကိုရရှိသွားခြင်းဖြစ်သည်။
( ၁ ) အာကာသထဲမှကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့အခြားနိုင်ငံများကြားထဲတွင် ထင်ရှားစွာမြင်တွေ့နိုင်သောတစ်ခုထဲသာရှိသော နိုင်ငံအဖြစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်သည်။
ရွေးချယ်ရသော အကြောင်းအရင်း။ ။မီးများ ထိန်ထိန်လင်းနေသော ကမ္ဘာ့အခြားနိုင်ငံများကြားထဲတွင် မှောင်မဲနေသောကြောင့် အခြားနိုင်ငံများကိုကျော်လွန်ပြီး အာကာသထဲမှကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံအား ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ထင်ရှားစွာ
( ၂ ) ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အလုပ်အကိုင်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးရာထူးများအား ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်သည်။
ရွေးချယ်ရသော အကြောင်းအရင်း။ ။၀င်ငွေအလွန်ကောင်းပြီး ပြောချင်ရာပြော၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ရပြီး ၊ တာဝန်လည်းယူစရာမလိုသော ကြောင့် ဤလိုအလုပ်မျိုး တခြားနိုင်ငံများတွင် မရှိသောကြောင့် ယခုနှစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
( ၃ ) ပြဿများအား အလွန်လျှင်မြန်စွာဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်သည်။
ရွေးချယ်ရသော အကြောင်းအရင်း။ ။လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လွန်စွာနည်းပါးစွာရရှိမှုကြောင့် ပြည်သူများမှ ဖယောင်းတိုင်များထွန်းညှိပြီး အစိုးရမင်းများသတိပြုမိစေရန် ငြိမ်းချမ်းစွာလှည့်လည်ပြီး မိမိတို့၏ဆန္ဒများအားဖော်ထုတ်ခဲ့သောကြောင့်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးဌာနသည် အလွန်လျှင်မြန်စွာဖြင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအားပြုလုပ်ပြီးတာဝန်ရှိသူ အရာရှိတစ်ဦးမှ ၎င်းတို့မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တကယ်မရှိ၍ မပေးနိုင်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိလိုပါက ( မိုးနတ်မင်း ) ထံတွင်သာ ဆုတောင်းကြရန်ဟု ပြောကြားရှင်းလင်း၍ ပြဿနာ ထိရောက်လျှင်မြန်စွာဖြေရှင်းပေးလိုက်ရာ ပြည်သူများမှာ မိမိတို့၏ အထက်တွင် အားကိုးစရာ
အစိုးရအရာရှိမင်းများသာရှိသည်ဟု ထင်ရာမှ၊ ယခုမူ အစိုးရမင်းများ၏ အထက်တွင် ( မိုးနတ်မင်းကြီး )ရှိနေသေးကြောင်း သိရ၍ အားတက်သွားပြီး ( မိုးနတ်မင်း ) ထံ ထပ်မံတိုင်တည် ဆုတောင်းရာ ၊
ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒ ပြင်းပြမှုကြောင့် မိုးနတ်မင်းမှာ မနေသာတော့လောက်အောင် မိမိထိုင်ရာ ကျောက်ဖျာတင်းမာလာ၍ မိမိ၏ခုံနေရာလေးပျောက်မည်စိုး၍ ငါကိုယ်တော်လည်း အမြန်သတင်းစာ
ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်မှ ဖြစ်တော်မူတော့မည်ဟု နှလုံးပိုက်ပြီးသကာလ online သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရန် online ပေါ်တက်၍ မိမိ၏ facebook acconunt အားဖွင့်ရာ internet connection မှာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး
မျှော်စင် ( ၁၀ ) လုံး၏ foundation များချိတ်ဆွဲထားသည့်အလား ယခင်နေ့များထက်ပင် ပို၍လွန်စွာလေးလံနေပြီး ( မိုးနတ်မင်း )လည်းလွန်စွာစိတ်ပျက်ပြီး internet connection ကောင်းလာရန်လည်း
မိမိကိုယ်တိုင် ( မိုးနတ်မင်း ) ဖြစ်နေသောကြောင့် ဘယ်သူ့ဆီတိုင်တည်ဆုတောင်းရမှန်း မသိဖြစ်နေစဉ် မိဘအလစ်တွင် ချစ်သူနှင့်ခိုးတွေ့ရန်ခဏလစ်ထွက်လာသည့် မိန်းကလေးနှယ် connection မှာလည်း
၀ုန်းကနဲဆိုပြီး အနည်းငယ်လေး မြန်လာတုန်း ( မိုးနတ်မင်း )လည်း အမြန်ပင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလေးအား လုပ်လိုက်ရသည်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အပြည့်အစုံမှာ ” မင်းတို့တောင့်တလွန်းလို့ငါကိုယ်ထင်ပြရတာကွ။
မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေပိုလျှံတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံခြားကို စွမ်းအင်တွေ၊ ဓာတ်ငွေ့တွေရောင်းစားခဲ့ပြီးခုမှ ငါ့ဘာလို့လာတောင့်တနေရတာလဲ????? ” ဟု internet connection ကိုကြောက်၍ တိုတို တုတ်တုတ်
online သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်၍ ပြည်သူများဖြေရှင်းပေးခဲ့ရသောကြောင့် ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
( ၄ ) ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပါဝါမျက်မှန်များ၊ နားကြားကိရိယာများ အများဆုံးတပ်သင့်သော အဖွဲ့များအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ပြည်သူများပါ် စာနာသနားကြင်နာတတ်သောသူများအဖြစ်သော်လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ အစိုးရဌာနများ၊ ရဲအရာရှိများ၊
၎င်းတို့နှင့် ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီအဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များအား ရွေးချယ်လိုက်ရသည်။
ရွေးချယ်ရသော အကြောင်းအရင်း။ ။အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းများသည် အလုပ်အလွန်လုပ်သောကြောင့် အလုပ်၏ပင်ပန်းမှုဒဏ်ကိုခံရပြီး မျက်စိများမှုန်၊ နားများလေးသွားသောကြောင့်လားမသိ။ ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းများ၊ ၎င်းတို့အောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊
၎င်းတို့နှင့်မကင်းရာမကင်းကြောင်းပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်း အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူများသည် ပြည်သူများနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ ဆိုင်များတွင်းသို့ အုပ်စုလိုက်ဝင်ရောက် ရမ်းကား၊ နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသည်များကို
ပြည်သူများမှ တိုင်ကြားသော်လည်း၊ လူပေါင်းများစွာမှသိရှိသော်လည်း၊အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းများမှတာဝန်ရှိသူများ၊ လူပုဂိုလ်များသည်၎င်းတို့ မသိပါ၊ မမြင်ပါ၊ မကြားပါဟုပြောကြားဖြေရှင်းခြင်း၊
သာမာန်ရိုးရိုးပြည်သူပြည်သားများကိုမူ၊ အာဏာရှင်များ၊ ၎င်းတို့နှင့်မကင်းရာမကင်းကြောင်း ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်း အဖွဲ့အစည်းများမှလည်းကောင်း ၊
အနိုင်ကျင့်၊ ဖိနှိပ်နှိပ်စက်သည့်ဒဏ်ကိုမခံနိုင်၍အဆုံး ပြည်သူများမှ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခြင်းကိုမူ ဆူပူနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများဟုသော်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများဟး၍လည်းကောင်း
ကင်ပွန်းတပ်၊ ပုဒ်မ၊ ပုဒ်ထီး၊ ပုဒ်အခြောက်၊ ပေါင်းစုံတပ်ပြီးသကာလ ကိုယ့်နိုင်ငံမှ တပ်စရာပုဒ်မကုန်သွား၍ ဤလောက်နဲ့အားမရသေးပဲ အခြားနိုင်ငံမှ ပုဒ်မများပါငှားရမ်းပြီးထပ်တပ်လို့ရပါက ထပ်တပ်ပြီး ဖမ်းရင်ကောင်းမလားဟု
စဉ်းစားသေးသော်လည်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသားမို့ ညှာလိုက်ပါ့မယ့်ဆိုပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်သာရှိသော ပုဒ်မ၊ ပုဒ်ထီး၊ ပုဒ်အခြောက်လောက်ဖြင့်သာ ဖမ်းဆီးသည်ကိုထောက်ချင့်ခြင်းအားဖြင့်
အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းများသည် ပါဝါမျက်မှန်များ၊ နားကြားကိရိယာများ အများဆုံးတပ်သင့်သော အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊မိမိတို့ပြည်သူများအပေါ်
( ၅ ) ကမ္ဘာပေါ်တွင် မျှတသောတရားစီရင်ရေးစနစ်ရှိသော နိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်သည်။
ရွေးချယ်ရသော အကြောင်းအရင်း။ ။ မကြာသေးမီကဖြစ်ပွါးခဲ့သော နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်ဦးမှ သတင်းထောက်တစ်ယောက်အား လူပုံအလယ်တွင် ပါးရိုက်ခဲ့သောဖြစ်ရပ်အားအမှုဖွင့်ရာ ပါးရိုက်ခဲ့သောဖြစ်စဉ်တွင်
လူသက်သေများရှိသော်လည်း တရားစီရင်ရေးအား ပိုမိုတိကျစေရန်ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် ဤလောက်နှင့်လက်မခံနိုင်ပဲ ပိုမိုတိကျစေရန် ဆေးစာယူခိုင်းရာ ဆေးရုံသို့ရောက်သောအခါ
ဒဏ်ရာမရှိ၍ ဆေးစာမရမှာစိုးရိမ်သောကြောင့် ကိုယ့်ပါးကိုယ်ပဲပြန်ရိုက်ပြီးဆေးစာယူရင်ကောင်းမလား၊ ဒါမှမဟုတ် မိမိပါးကိုရိုက်ခဲ့သော မင်းသမီးကိုပဲ
တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ဆေးရုံသို့ပင့်ဖိတ်ပြီး ဆေးစာရေးပေးမည့်တာဝန်ရှိသူရှေ့မှောက်တွင်ဆေးစာရအောင် ထပ်ရိုက်ခိုင်းရမလားမသိအောင်ခေါင်းစားသွားစေအောင် အလွန်တရာ စေ့စပ်သေချာသော
ဆေးစာရရှိ၍ တရားရုံးသို့ရောက်ရှိသော အခါတွင်လည်း ဤလိုအမှုကိုပင် တရားရေးမဏ္ဍိုင်လွဲချော်မည်စိုးရိမ်သောကြောင့် တစ်နှစ်ကျော်အောင် အသေးစိတ်တိတိကျကျမလွဲမချော်ရလေအောင်စစ်ဆေးပြီး သကာလ
တရားစီရင်ရေးစနစ်၏အလွန်တရာကောင်းမွန်မှု၊ ဥပဒေများ၏ မျှတမှန်ကန်မှုတို့ ကြောင့် တရားခံသည်မည်သို့မျှမငြင်းနိုင်တော့ပဲ ဥပဒေ၏ဆုံးမအရေးယူခြင်းကိုခံရပြီး ( ဒဏ်ငွေ တစ်ထောင် ) အားပိုးစိုးပက်စက်
ပေးဆောင်စေကာ နှောင်းလူများ ဤသို့မလုပ်နိုင်စေရန် စံပြစီရင်ထုံးအနေဖြင့် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီး
ဥပဒေ၏အထက်တွင်ဘယ်သူမှမရှိဟူသော ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ဖော်ဆောင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သောကြောင့် ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်ရသော အကြောင်းအရင်း။ ။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းချနေသော phone များ၊ ကားများ၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို မြန်မာပြည်တွင်ရောင်းချနေသောဈေးနှုန်းဖြင့် တခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် သွားရောက်ရောင်းချပါက ဘယ်သူမှ
၀ယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤသို့တခြားနိုင်ငံတွင် မည်သူမျှမ၀ယ်ယူနိုင်သော ဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချမှုကို မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ၀ယ်ယူနိုင်သောကြောင့် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအားရွေးချယ်လိုက်
ရွေးချယ်ရသော အကြောင်းအရင်း။ ။အခြားနိုင်ငံများတွင် တစ်ရာ၊ တစ်ထောင်လောက်သာ ရနိုင်သော ပစ္စည်းများ၊ ဘယ်သူမှမ၀ယ်မည်စိုး၍ သုံးစွဲသူများကို အောက်ကျနောက်ကျခံပြီး မိမိပစ္စည်းသုံးအောင် အလကားပေးပြီး မနည်းရုံးကန်ယှဉ်ပြိုင်နေရခြင်း
တို့ဖြင့် မိမိတို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်အောင်မနည်းလုပ်နေရသော်လည်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူအချို့နှင့် စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးအချို့သည် အခြားနိုင်ငံများတွင် တစ်ရာ၊ တစ်ထောင်လောက်သာ
ရနိုင်သော ပစ္စည်းများကို မိမိတို့နိုင်ငံတွင် အဆပေါင်းသောင်းနဲ့ချီရအောင်ရောင်းပြသွားပြီး၊ စားသုံးသူများမှလည်း ဤပစ္စည်းများကို မျက်နှာငယ်လေးများဖြင့် အဟောက်ခံ၊ အဟစ်ခံ တိုးဝှေ့ဝယ်ယူရပြီး
ရောင်းချသူများ၏ ခြေသလုံးဖက်ပြီး မ၀ယ်ယူရသည်ကိုပင် ၎င်းတို့မှ သဘောထားကြီးမားလှပေသည်ဟုအောင့်မေ့ကျေးဇူးအထူးတငရှိ်ပြီး ၀ယ်ယူရလေအောင် မိမိတို့၏စီးပွါးရေးပညာဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်ကြောင်းကိုပြသသွားပြီး၊
အခြား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှ မျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ အံ့သြ မှင်တက်ပြီး လေးစားသွားရလောက်အောင် ပြသနိုင်သောကြောင့်
နိုဘယ်လ်ဆု ပေးရေးအဖွဲ့သည် မြန်မာ့စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအား ( စီးပွါးရေး နိုဘယ်လ်ဆု ) ပင်ပေးရင်ကောင်းမလားဟု နိုဘယ်လ်ဆု ပေးရေးအဖွဲ့ကိုပင်ခေါင်းစားအောင်
( ၈ )စွန့်ပစ်အမှိုက် ပစ္စည်းများအား အလေအလွင့်မရှိရလေအောင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်သည်။
ရွေးချယ်ရသော အကြောင်းအရင်း။ ။တချို့သော နိုင်ငံများသည် မိမိနိုင်ငံတွင်ထားရှိပါက အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ စွန့်ပစ်စရာနေရာမရှိသောကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အမှိုက်အဖြစ် ဖျက်ဆီးလိုက်ပါကလည်း
တစ်ပြားမှမရပဲဆုံးရှုံးမည့်အတူတူ ၊ဘယ်နိုင်ငံမှမယူသော ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏အမှိုက်များအား ၊အလကားလည်းစွန့်ပစ်ပြီးသားလည်းဖြစ်၊ ပိုက်ဆံလဲရ တစ်ပြားရရ၊ တစ်ပဲရရဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံသို့တင်ပို့လိုက်ရာ
မြန်မာအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့် လုပ်ငန်းရှင်အချို့သည် ဤအမှိုက်များအား သိသိကြီးနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ မသိလိုက် မသိဘာသာသော်လည်းကောင်း ပြည်တွင်းတွင် အလေအလွင့်မရှိရလေအောင်
စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲပြီး အလေအလွင့်မရှိ ရောင်းချနိုင်သောကြောင့် စွန့်ပစ်အမှိုက် ပစ္စည်းများအားအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအား ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
( ၉ ) မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဧည့်သည်များနေပျော်ရာ၊ ဧည့်သည်အများဆုံးနေထိုင်ရာနိုင်ငံအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဤလုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံ့ဝင်ငွေအများဆုံးရှာဖွေပေးရာ နိုင်ငံအဖြစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်သည်။
ရွေးချယ်ရသော အကြောင်းအရင်း။ ။မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် နိုင်ငံသားဆိုသော်လည်း အခြားပြည်နယ်၊ တိုင်းမဆိုထားနဲ့ဦး၊ ဟိုဘက်လမ်းနှင့် ဒီဘက်လမ်းညအိပ်ညနေသွားနေလျှင်ပင် ဧည့်စာရင်းတိုင်ရပေသည်။
ဤသို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် နိုင်ငံသားဆိုသော်လည်းဧည့်သည်များဖြစ်နေသောကြောင့် ဧည့်သည်အများဆုံးနေထိုင်ရာ တိုင်းပြည်ဖြစ်ခြင်း ။
ထိုကြောင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအား အားကိုး စရာမလိုပဲ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခ ၀င်ငွေဖြင့်ပင် တိုင်းပြည်အားအခွန် ၀င်ငွေအား တိုးပွါးအာင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်သောကြောင့်
အခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ အတုယူ လေ့လာနိုင်စေရန် ဧည့်သည်အများဆုံးနေထိုင်ရာနိုင်ငံအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
( ၁၀ ) ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပြောနှင့်အလုပ်ညီသော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ်အရှိဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်သည်။
ရွေးချယ်ရသော အကြောင်းအရင်း။ ။မြန်မာပြည်၏ ကျန်းမာရေး ဌာနမှ ၎င်းတို့ကျန်းမာရေးဌာနသည် လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကဲ့သို့မဟုတ်ပဲ အပြောနှင့်အလုပ်ညီသော ဌာနဖြစ်ကြောင်း ၊ဤသည်အား အတည်ပြုပေးပါရန် ဖိတ်ခေါ်သောကြောင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာ့ စံချိန်စံညွှန်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံပိုင်ဆေးရုံများ၊ ကျန်းမာရေးဌာနများသို့ ရုပ်ဖျက်ပြီးသွားရောက်စစ်ဆေးရာ တကယ်ပင် အပြောနှင့်အလုပ်ညီသော ၀န်ကြီးဌာနအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ စံချိန်စံညွှန်း
၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော ( ” စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေး ” ) ပေါ်လစီကို အောက်ခြေ၀န်ထမ်းမှစပြီး အထက်ဆုံးပုဂိုလ်အထိ လွန်စွာလိုက်နာကျင့်သုံးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးရေး
အဖွဲ့မှာ် အပြန်လေယာဉ်ခကိုပင် သံရုံးမှချေးသွားရသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည်ကျန်းမာရေးဌာနများ၊ ဆေးရုံဆေးပေးခန်းများသို့ဝင်ရောက်ရာ ( ” စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေး ” )ဆိုသော ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် တံခါးပေါက်စောင့်ဝန်ထမ်းမှစပြီး အပေါ်ဆုံးအကြီးဆုံးပုဂိုလ်အထိ မိမိတို့တွင်ပါလာသော
( ဒင်္ဂါးပြား )လေးများအား မျှပြီးပေးခဲ့ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆေးရုံမှ ပြန်ထွက်ခ မတောင်းသည်ကိုပင် ကျေးဇူးတင်ခဲ့ရသေးသည်။
ထိုကြောင့်မြန်မာပြည်၏ ကျန်းမာရေး ဌာနများ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းများ၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနအား အပြောနှင့်အလုပ်ညီသော ဌာနအဖြစ် တညီတညွှတ်တည်း ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ ဂင်းနစ်အဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှ ယခုနှစ်အတွက် ချီးမြှင့်သော ဆုများအားလုံးကို သိမ်းပိုက်သွားနိုင်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဤစံချိန်များရရှိအောင် မည်သို့ကြိုးစားအားထုတ်ထားသည်
ဟေး …….ဒါမှ ငါတို့မြန်မာကွ ။
နောက်ထပ်လဲ ကမ်ဘာမှာအတော်ဆုံး ဖုန်းဆာဗာအသုံးပြုတဲ့ နိုင်ငံ အဖြစ် သမုတ်ခံရအုန်းမှာ ပြိုင်ဘက်မရှိပါ
PaLote Toteရေ. များများသြဘာပေးမှနော်။
@ကိုပေရေ. ဖုန်းတွေကတော့ ပြောလို့ မရ၊ခေါ်လို့ မရ၊
ပြည်သူတွေ ဖုန်းဘီလ်ကုန်၍ အသက်ထွက်။
ဒီပို့ စ်မှာ Naung Naung Phoenix ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုရပါတယ်။ကျနော်တို့ ကျေးလက်တွေ၊မြို့ါ်မကျန်
ဆေးရခု၊ဆေးပေးခန်း၊ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနပါမကျန်အားလုံး လိမ်စား၊ညာစားနေကြတုန်းပါ။လက်တွေ့ 
မှာဘာတစ်ခုမျှအသုံးမကျသလို၊ ပြည်သူကို စောင့်ရှောက်ရာနေရာမဟုတ်ပါဘဲ ငွေညစ်ရာနေရာများအဖြစ်
တိုင်း (သို့ )စစ်ခွေးဆိုးများ လက်ထက် အတိုင်းပင်။ငွေမရှိအသေခံရပါမည်။
ကျန်းမာရေး နဲ့ ပတ်သက်၍ ဘက်ပေါင်းစုံမှ ချွတ်ခြုံကျနေသော ကျန်းမာရေးဌာနကို ပြုပြင်ပေးဖို့ အတွက်ငှာ
ပို့ စ်တစ်ခု ထပ်မံတင်ပေးသွားပါအုံးမည်။
ရယ်မောရင်း အားပေးသွားပါတယ် ကိုနာဂရေ။
စေတနာနဲ့တင်ပြလိုက်တာပါ။ ဧရာဝတီဘလော့က ဟာမိုလို့ပါ။ ဒင်းဆိုဒ်က ဒီမှာ မကြာခဏပြဿနာရှာတတ်လို့ပါ။ အမှန်ပြောရရင် သူတို့လည်း သူများဆီက ကူးနေတာပဲလေ။ (naungnaung-phoenix)က အရင်ရေးတယ်ထင်တယ်ဗျ..။ ဒါကိုသူတို့ က သူတို့ ဆိုဒ်ကဆိုပြီး..လုပ်နေမှာဆိုးလို့နော့။
ဧရာဝတီဘလော့ . ၂၈ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၂ —- ဒီတပတ်မှာတော့ ဧရာဝတီရဲ့ တပတ်တာ ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်တာကတော့ ဂင်းနစ်စံချိန်သစ်များ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဂင်းနစ်အဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှ ယခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ်များကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ ထူးခြားချက်မှာ စံချိန်သစ်များအားလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံမှ အားလုံးကိုရရှိသွားခြင်းဖြစ်သည်။
” မင်းတို့တောင့်တလွန်းလို့ငါကိုယ်ထင်ပြရတာကွ။ မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေ ပိုလျှံတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံခြားကို စွမ်းအင်တွေ၊ ဓာတ်ငွေ့တွေရောင်းစားခဲ့ပြီးခုမှ ငါ့ဘာလို့လာတောင့် တနေရတာလဲ????? ” ဟု internet connection ကိုကြောက်၍ တိုတို တုတ်တုတ် online သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်၍ ပြည်သူများဖြေရှင်းပေးခဲ့ရသောကြောင့် ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော ( ” စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေး ” ) ပေါ်လစီကို အောက်ခြေ၀န်ထမ်းမှစပြီး အထက်ဆုံးပုဂိုလ်အထိ လွန်စွာလိုက်နာကျင့်သုံးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှာ အပြန်လေယာဉ်ခကိုပင် သံရုံးမှချေးသွားရသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည်ကျန်းမာရေးဌာနများ၊ ဆေးရုံဆေးပေးခန်းများသို့ဝင်ရောက်ရာ ( ” စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေး ” ) ဆိုသော ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် တံခါးပေါက်စောင့် ၀န်ထမ်းမှစပြီး အပေါ်ဆုံးအကြီးဆုံးပုဂိုလ်အထိ မိမိတို့တွင်ပါလာသော ( ဒင်္ဂါးပြား )လေးများအား မျှပြီးပေးခဲ့ ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆေးရုံမှ ပြန်ထွက်ခ မတောင်းသည်ကိုပင် ကျေးဇူးတင်ခဲ့ရသေးသည်။
by NaungNaung Phoenix
အင့်. ကနဲ နင့်သွားပါတယ်။ဟိုကူး၊ဒီကူး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့်. အရမ်းကောင်းပါတယ်လို့ ထောက်ခံပါတယ်။
ဟိုက် …ခနဲတောင် အော်လိုက်မိလို့ …
နေဦး..နက်ဆိုင်ထဲမှာက…မီးစက်သံ ဆူဆူညံညံ.နဲ့ ..ကိုယ်သုံးတဲ့ စက်ကို…ငေးပြီး.
ကြည့်နေတဲ့ ..အလိုက်ကန်းဆိုးမသိသူတွေနဲ့ ..ဆိုတော့…
ပို့ စ်လေးကို..တင်ပေးလို့ကျေးဇူး….နာဂရချစ်သူရေ.
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးကား ခန့်နားလှပေစွ ၊ ထည်ဝါလွန်းပေစွ ၊
အံ့သြ မကုန်နိုင်လောက်အောင် ကြီးကျယ်လွန်းပါပေစွ၊
ဒါမှ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟူ၍ #@%!& အမြဲ တစေ ထင်ပေါ်နေမည်သာတည်း ။
ရေးပဲ ရေးတတ်တယ်ဗျာ… တကယ်ပါပဲ…
အကုန်သိမ်းကြုံး မယူပါနဲ့ မြန်မာပြည်ရယ်၊ တခြားတိုင်းပြည်တွေအတွက် ချန်ထားပါအုံး။
ဟုတ်တယ်ဗျာ။တခြား တိုင်းပြည်တွေခမျာ လိုချင်တာတောင် မရတော့ဘူး။
@အကိုR Gaရေ ခုလို ထောက်ပြညွှန်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။အားပေးကြတဲ့
ရွာထဲက ညီအရင်းအကို မောင်နှမများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြော